tournament – Gaming Noodle
လောင်းကစားပြုလုပ်ရန် Dota2 ပြိုင်ပွဲအတုများ ဖန်တီးခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့ Liquipedia Covid-19 ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် Dota2ပြိုင်ပွဲများအားလုံးကို အွန်လိုင်းပေါ်ကနေသာ ကျင်းပနေခဲ့ရတာ ယခုဆိုရင် ၆ လ ကျော် အချိန်ကာလထဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ Esports လောကအတွင်း Dota2ပြိုင်ပွဲများ ဆက်လက်ရှင်သန် နေစေဖို့အတွက် ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးအဖွဲ့အစည်းများအနေနဲ့ ခက်ခဲစွာ ကြိုးပမ်း နေခဲ့ရတာဟာလည်း ကာလအတော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယခုနှစ် မတ်လက စလို့ ယခုအချိန်ထိ LAN ပြိုင်ပွဲလုံးဝမရှိတဲ့အတွက် ပြိုင်ပွဲကျင်းပသူများဟာ ငွေကို နည်းနည်းချင်းစီ အသုံးပြုကာ အွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲငယ်လေးများ စဉ်ဆက်မပြတ်ကျင်းပနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းလာကြပါတယ်။ Dota2လောကအတွင်းက အသင်းအမြောက်အများဟာလည်း ဆုကြေးငွေပမာဏနည်းပါးတဲ့ ပြိုင်ပွဲလေးများ ကြောင့် ဆက်လက်ရှင်သန်ရပ်တည်ဖို့ ခက်ခဲလာသလို အချို့ဆိုရင် …
လောင်းကစားပြုလုပ်ရန် Dota2 ပြိုင်ပွဲအတုများ ဖန်တီးခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့ Liquipedia Read More »
အနိုင်ရသူကို ဆုကြေးငွေ ဒေါ်လာ ၁၂,၀၀၀ ချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ Among Us Esports ပြိုင်ပွဲ PC ပေါ်မှာရော မိုဘိုင်းလ်ပေါ်မှာပါ ကစားလို့ရတဲ့ Among Us ဂိမ်းဟာ ယင်းရဲ့ရိုးရှင်းလွယ်ကူမှုကြောင့် Esports ဆန်ဆန်ပြိုင်ပွဲ များပြုလုပ်လာလိမ့်မယ်လို့ ယခင်က မည်သူမှထင်မထားခဲ့ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မကြာသေးမီကတော့ Esports အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ FaZe Clan ဟာ နာမည်ကျော် streamer များကို ခေါ်ယူကာ Among Us In-Vent-Ational ပြိုင်ပွဲကို ပြုလုပ်ပြီး ဆုကြေးငွေစုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၂၅,၀၀၀ အထိ ချီးမြှင့်ခဲ့လို့ လူအများအံ့အားသင့်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ယင်းပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင်ရဗိုလ်စွဲသွားသူကတော့ Twitch streamer တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Yetiapocalypse ပါ။ FaZe Clan ဟာ …
အနိုင်ရသူကို ဆုကြေးငွေ ဒေါ်လာ ၁၂,၀၀၀ ချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ Among Us Esports ပြိုင်ပွဲ Read More »
ပွဲကြီးပွဲကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာဦးမယ့် OMEGA League: Europe Immortal Division
[Unicode] ပွဲကြီးပွဲကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာဦးမယ့် OMEGA League: Europe Immortal Division Epic Esports Events နဲ့ WePlay! တို့ ပူးတွဲကျင်းပတဲ့ OMEGA League ရဲ့ ဆုကြေးအများဆုံးနဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ OMEGA League: Europe Immortal Division ကတော့ မကြာခင် အချိန်တိုအတွင်းမှာ စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ OMEGA League ကို Europe, America နဲ့ Asia Region ကြီး ၃ ခုမှာကျင်းပခဲ့ပြီး အဆိုပါလိဂ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ အမြင့်ဆုံးအဆင့်လို့ဆိုရမယ့် Immortal Division ကိုတော့ အသင်းကောင်းတွေ အများဆုံးရှိတဲ့ Europe မှာပဲကျင်းပသွားမှာပါ။ OMEGA League: Europe Immortal Division ပြိုင်ပွဲမှာ …
ပွဲကြီးပွဲကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာဦးမယ့် OMEGA League: Europe Immortal Division Read More »
ကြည့်ရှုသူပရိသတ်များကိုပါ ဆုကြေးငွေချီးမြှင့်မယ့် Dota2ပြိုင်ပွဲ BLAST Bounty Hunt
[Unicode] ကြည့်ရှုသူပရိသတ်များကိုပါ ဆုကြေးငွေချီးမြှင့်မယ့် Dota2ပြိုင်ပွဲ BLAST Bounty Hunt နာမည်ကျော် CS: GO ပြိုင်ပွဲကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ BLAST Pro Series နဲ့ BLAST Premier တို့ကို ကြီးမှူးကျင်းပနေခဲ့တဲ့ RFRSH Entertainment ဟာ ယခုအချိန်မှာတော့ Dota2ဘက်ကို ခြေဦးလှည့်လာခဲ့ပါပြီ။ BLAST Bounty Hunt လို့ အမည်ပေးထားပြီး ဆုကြေးငွေစုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၁၄၅,၀၀၀ ချီးမြှင့်မယ့် ယင်းပြိုင်ပွဲကို ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ကနေ ၁၃ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ BLAST Bounty Hunt မှာ ပါဝင်လာမှာဖြစ်ကြောင်း ကြေညာထားတဲ့ အသင်း ၆ သင်းကတော့ …
ကြည့်ရှုသူပရိသတ်များကိုပါ ဆုကြေးငွေချီးမြှင့်မယ့် Dota2ပြိုင်ပွဲ BLAST Bounty Hunt Read More »
Europe နဲ့ CIS အကောင်းဆုံးအသင်းတွေပါဝင်မယ့် WePlay! Pushka Dota2 League
[Unicode] Europe နဲ့ CIS အကောင်းဆုံးအသင်းတွေပါဝင်မယ့် WePlay! Pushka Dota2 League 2020 ခုနှစ်အတွင်း အတိုးတက်ဆုံး Dota2 ပြိုင်ပွဲ စီစဉ်သူ (Organizer) လို့တောင် သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ WePlay! ကတော့ နောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲ ကြေညာလိုက်ပါပြီ။ ဒီတစ်ကတော့ Dota2 League ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအသင်းတွေ ပါဝင်ကြမှာပါ။ WePlay! ဆိုတာ ယူကရိန်းအခြေစိုက် Esports ပွဲစီစဉ်သူ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်ထဲမှာပဲ ဒုတိယ DPC Minor ဖြစ်တဲ့ WePlay! Bukovel Minor, ဆုကြေးဒေါ်လာ ၃၀၀,၀၀၀ ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ WePlay! Mad Moon, COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆုကြေးဒေါ်လာ ၁၂၀,၀၀၀ …
Europe နဲ့ CIS အကောင်းဆုံးအသင်းတွေပါဝင်မယ့် WePlay! Pushka Dota2 League Read More »
အၿပိဳင္ႀကဲၾကေတာ့မယ္ Dota Chess ၿပိဳင္ပြဲမ်ား
[ZawGyi] Video Game မ်ားတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ လူၾကဳိက္မ်ားခဲ့ေသာ Gaming Category မ်ားစြာရွိခဲ့ပါတယ္။ FPS, MOBA, MMORPG, Simulation, Combat, Sports, RPG, RTS စသည္ထက္ ပုိေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားစြာ ရွိၾကျပီး ယခု ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ Esports ရာသီမွာေတာ့ RTS title ေအာက္ကေန Auto Chess (Auto Battler) ဆုိတဲ့ Title တစ္ခုဟာလည္း အခ်ိန္တုိအတြင္း ကမာၻေပၚတြင္ လူၾကဳိက္မ်ားေရပန္းစားလာခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါ Auto Chess Video Game မ်ားဟာ အပ်င္းေျပေဆာ့ကစားရတဲ့ Video Game တစ္ခုမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ဆုေၾကးခ်ီးျမွင့္ေပးမယ့္ ESports Category ဝင္သည့္ Video Game တစ္ခုျဖစ္လာပါျပီ။ …
အၿပိဳင္ႀကဲၾကေတာ့မယ္ Dota Chess ၿပိဳင္ပြဲမ်ား Read More »
ကိုယ္ပုိင္ Esports ၿပိဳင္ပြဲကို ေၾကျငာလိုက္တဲ့ နင္တန္းဒုိး
[Zawgyi] ကိုယ္ပုိင္ Esports ၿပိဳင္ပြဲကို ေၾကျငာလိုက္တဲ့ နင္တန္းဒုိး ဂ်ပန္အေျခစုိက္ ဂိမ္းကုမၸဏီႀကီး နင္တန္းဒိုး (Nintendo) ဟာ သူတုိ႔ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ Super Smash Bros (SSB) Ultimate ဂိမ္းအတြက္ တရားဝင္ Esports ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုကို က်င္းပသြားမယ္လို႔ ေၾကျငာလာပါတယ္။ ဒီသတင္းကို အေမရိကန္ နင္တန္းဒုိးရုံးခ်ဳပ္ရဲ႕ ဥကၠဌ ေဒါ့ဂ္ေဘာင္ဆာမွ ေၾကျငာခဲ့တာပါ။ ပထမဆုံးၿပိဳင္ပြဲကေတာ့ အခုဇြန္လမွာ က်င္းပမယ့္ SSBU Online Open ျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီက ဂိမ္မာေတြအတြက္ ဝမ္းနည္းစရာကေတာ့ ဒီၿပိဳင္ပြဲဟာ ကေနဒါ၊ မက္ဆီကိုနဲ႔ ေျမာက္အေမရိကမွ ကစားသမားေတြ အတြက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ နင္တန္းဒုိးဟာ ၿပိဳင္ပြဲမွာအသုံးျပဳမယ့္ စည္းမ်ဥ္းအား သူတုိ႔ကိုယ္ပိုင္ Rule-set ကိုပဲ သုံးမွာလား၊ …
ကိုယ္ပုိင္ Esports ၿပိဳင္ပြဲကို ေၾကျငာလိုက္တဲ့ နင္တန္းဒုိး Read More »
Media Partnership with Yangon CSGO Network
1 Comment	/ LOCAL / By Gaming Noodle
[ZawGyi] ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ မၾကာမီက်င္းပေတာ့မယ့္ Yangon CSGO Network(YCN) Counter Strike : Global Offensive Tournament ရဲ႕ Media Partner အျဖစ္ ပူးေပါင္းခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Yangon CSGO Network (YCN) က ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ CSGO အသင္းေတြ အေျမာက္အမ်ား ေပၚထြက္လာေစဖို႔နဲ႔ တကယ္ႀကိဳးစားလိုစိတ္ရွိတဲ့ Player ေတြကို ေထာက္ပံေပးဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး က်င္းပေပးမယ့္ ၿပိဳင္ပြဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ YCN ရဲ႕ ပထမဆံုးၿပိဳင္ပြဲကိုေတာ့ လာမယ့္ ၈ ရက္ေန႔မွာ စတင္က်င္းပမွာ ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္ကိုေတာ့ page မွာ ၾကည့္႐ွဳႏိုင္ပါတယ္။ ထိုျပဳိင္ပြဲဟာ ဆုေၾကးေငြ စုစုေပါင္း ၆၀၀,၀၀၀ ေပးအပ္မယ့္ …
Media Partnership with Yangon CSGO Network Read More »
IEM Sydney 2019 CSGO Tournament Preview
LeaveaComment	/ PREVIEW AND REVIEW / By Gaming Noodle
Intel Extreme Masters (IEM) Sydney CS:GO ၿပိဳင္ပြဲအၾကိဳသုံးသပ္ခ်က္ က်င္းပရက္ – April 30th to May 5th ဆုေၾကး – 250,000 US Dollar တည္ေနရာ – ဆစ္ဒနီ၊ ၾသစေၾတးလ် ပါဝင္သည့္အသင္း – ၁၆သင္း (FaZe, Fnatic, Team Liquid, MIBR, mousesports, NIP, NRG esports, Renegades, Heroic, BIG, eUnited, Vici Gaming, MVP PK, BOOT-ds, Graygound, Chiefs) Live ၾကည့္ရႈရန္ – Twitch, eGG Network(Only Main Event) ၾသစေၾတးလ်၊ …
IEM Sydney 2019 CSGO Tournament Preview Read More »